World စိုက်ပျိုးရေးစက်မူထူးခြားတဲ့နည်းပညာ, အရည်အသွေးအပျြောမှေ့, ကမ္ဘာ၏တိုင်းထောင့်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအနာဂတ်တံခါးဖွင့်လူမှုရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်များကို။
စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးမှု, fertilization, ပိုးမွှားထိန်းချုပ်မှုကနေဖြေရှင်းချက်ပေး
Aolong စီးရီး (WD904) ဘီးထွန်စက်
ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ကု သ. မရသောအရာပိုမိုလွယ်ကူစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဂီယာ 10 + 10 လွန်းချမှတ်။
Air ကိုဘရိတ်လမ်းပို့ဆောင်ရေးများအတွက် optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
cabin optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် ($ 100 သန်း)
1 Use 102hp turbo engine with high power and low fuel...
1 Use 102hp turbo engine with lower fuel consumption...
1 Adopt transmission 10+10 shuttle for easier operatio...
1 Use big power engine which can ensure that transpl...
1 Adopt transmission 8+8 shuttle for easier operation...
1 Use 88HP turbo engine with high power and low fuel...
Adopt One-button setting function of detecting terrai...
115 စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများ - စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှု 100 ဦးကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ပိုကြည့်ရှုပါ
World လယ်ယာစက်ပစ္စည်း Jiangsu Wadder Group မှ, တရုတ်ထိပ်တန်း 500 ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတဆက်နွယ်နေသည်။ ဒါဟာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ထုတ်လုပ်မှု, အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေါင်းစပ်တဲ့အကြီးစားခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးစက်မှုလယ်ယာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် 8 ဘီလီယံယွမ်ကိုကျော်လွန်နေပါသည်။ ၎င်း၏အဓိကထုတ်ကုန်စပါးရိတ်ခြင်းနှင့်လယ်ထွန်စက်, များစွာသောအမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်အနိုင်ရနှငျ့ "ISO9001: 2000 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်" သွားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပထမဦးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာကြပါပြီ။
ပကတိမဟုတ်လူလုပ်သော အင်ဂျင်နီယာနှင့်အသိဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်နောက်ထပ်ကျယ်ပြန့်အသုံးချခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းအသံအတိုးအကျယ်ကျယ် margin နဲ့ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေးစက်မှုလယ်ယာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်ကြပြီအားထုတ်မှုအားဖြင့်ဦးဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။
AGRITECHNICA ASIA and Horti ASIA 2018 exhibitions expand...
Bangkok, Thailand, 29 August 2018 – With increased numbers of both exhibitors and visitors, the second editi
WORLD Brand services the world
On the 26th2019, Qian Lixia, the embassy of the Embassy of Côte d& 39;Ivoire, Jacob Babel, Director of the
There is no love in disaster,but WORLD has love in humans heart.
June 23,2016,at about 15:00 pm,in Funing and Sheyang Town, etc, Yancheng City, Jiangsu province, there was appeari
ADD:　Daicheng စက်မှုပန်းခြံ,
Danyang စီးတီး, Jiangsu ပြည်နယ်
အရောင်း Hotline: 0511 - 86341541
ဝန်ဆောင်မှု Hotline: 0511 - 86342622
Copyright copy 2019 Jiangsu World Agricultural Machinery All Rights Reserved.